Qaab dhismeedka 'Medieval typography': noocyada loo adeegsado mashaariicdaada | Abuurista khadka tooska ah
Noocyada qarniyadii dhexe, oo sidoo kale loo yaqaan 'font gooth', waa mid ka mid ah kuwa ugu xarrago iyo qadiimiga ah ee aad ka heli karto. Isticmaalkeeda waxay kicinaysaa qarniyadii dhexe, waqtiyadii fanaaniinta, qalcadaha iyo dagaalada udhaxeeya dagaalyahanada qadhaadh.
Iyo inkasta oo maanta aan ka tagnay waqtigaas waqti dheer ka hor, naqshadeeye ahaan waxaad isku arki kartaa waqti uun mashruuc u baahan qaab-qorista noocan ah. Sidaa darteed, ma dhaawaceyso inaad haysato ilo yar oo dhexe si aad awood ugu siiso macmiilkaaga soo-jeedimo kala duwan, miyaadan u malayn? Waxaan ka hadalnaa makiinado qarniyadii hore.
1 Qaab dhismeedka qarniyadii dhexe: waa maxay asalkiisu
2 13 Astaamaha Qarniyadii Dhexe Aaraajiyadaada Waad Soo Dejisan Kartaa
2.2 Maro madow
2.3 Olde Ingiriisi
2.4 Iimaanka oo dumaya
2.5 Qoyska Madoow
2.7 Jumladaha qarniyadii dhexe: Angel Wish
2.10 Jumladaha qarniyadii dhexe: Qoraalka Medici
2.13 Jaangooyooyinka Qarniyadii dhexe: Frax Oo Lagu Qoray
Qaab dhismeedka qarniyadii dhexe: waa maxay asalkiisu
Nooc dhexdhexaad ah, ama nooc gothic ah, Waxaa la abuuray qarnigii XNUMXaad ujeedkiisuna wuxuu ahaa in la qoro luqadda Gothic, kaas oo ahaa kii ay ku hadlayeen Goths. Asalkiisa waxaa laga helaa waxa loo yaqaan Codex Argenteus, ama tarjumaadiisa, "Buugga Lacagta ama Baybalka." Tan waxaa lagu qoray Laatiinka waxaana qoray Bishop Ulfilas. Si kastaba ha noqotee, dhab ahaantii waxay ahayd tarjumaad laga soo qaatay Griigga laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad ee bible ilaa Gothic.
Haddii aad ogaato, gothic-ka asalka ahaa mid "la fahmi karo", maaddaama ereyada aysan lahayn qalab badan. Waxa kale oo jira xarafyo hada ku kala duwan waxa aad odhan lahayd (tusaale ahaan g oo u eg r; ama j oo u eg g).
In qarniyadii dhexe, noocaani waa la soo ceshay waxaana loo isticmaalay qaab muuqaal ahaan kala duwan laakiin wuxuu siinayaa qaab ka buuxo badan.
13 Astaamaha Qarniyadii Dhexe Aaraajiyadaada Waad Soo Dejisan Kartaa
Tan iyo markii aan kaa dooneyno inaad xulasho yeelato, waxaan sameynay xul ah dhowr xarfaha qarniyadii dhexe oo laga yaabo inay xiiso leeyihiin. Oo kala duwan. Mashruucaas aad gacanta ku hayso wuxuu noqon karaa astaan, boodhadh ama xitaa jeldiga buugga, iyo sida waxyaabo kale oo badan, waxaa jiri doona nooc farqi ah oo qumman oo ku habboon mashruuc kasta.
Waxaan ku bilaabaneynaa farqi duug ah oo soo jiidan doona dareenkaaga horumarka uu leeyahay. Waana in qaabkeedu yahay gabi ahaanba. Hadda, waa inaad maanka ku haysaa inay runti tahay xuruufta waaweyn ee leh naqshadeynta ugu quruxda badan; warqad yar, inkasta oo ay goothic yihiin, way ka jilicsan yihiin.
Dhinac waa hagaagsan tahay, maxaa yeelay waxaad isticmaali kartaa xarfaha waaweyn si aad u soo jiito feejignaanta iyo xarfaha yar yar si fariinta loo fahmo ama qoraalka aad dhigto si fiican loo akhriyo.
Noocaan noocan oo kale ah waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan, iyo xuruufta waaweyn waa kuwa leh naqshad leh barwaaqo badan halka kiiska hoose uu aad uga fududyahay.
Xaaladdan oo kale, iyada oo loo adeegsanayo farqiga dhexe ee khamaarista khadadka wanaagsan, waxaad ka heli doontaa mid ka mid ah wuxuu u muuqdaa mid faalig ah kiiskiisa hoose, laakiin marka la eego xarfaha waaweyn, kuwani waxaa loo qaabeeyey si xoogaa xiisa badan maxaa yeelay, xarfaha qaarkood gudahooda, waxaad moodaa nooc calan ama sawir la mid ah inuu muuqdo.
Iimaanka oo dumaya
Ishaani dhexe waa mid ka mid ah kuwa aan sida aadka ah u jecel nahay taas muuqaalka sida ceeryaamo ayay abuurtaa. Ku habboon, tusaale ahaan, buugaagta Scottish-ka ama haddii aad rabto inaad mashruuca siiso taabasho u dhexeeya cirfiid, gothic, duug iyo dahsoon
Ka hadalka Qoyska Madoow wuu sii dheeraan doonaa. Waana in dhammaan noocyadan qarniyadii dhexe ay leeyihiin noocyo kala duwan oo kaa caawin kara inaad hesho midka aad doorbideyso. Ku waxaad leedahay gabi ahaanba madow, oo leh xoogaa hoos ah, oo leh saameyn gargaar (jilid 3D ah), iwm.
Garaacis qaro weyn leh, Qadiimiga ah wuxuu u soo baxayaa qaab qaab fudud oo si fudud loo fahmi karo Haa, isaga Qaab-dhismeedka wuxuu saameynayaa labada weeyn iyo kan yar; waana kan dambe oo umuuqda, xaaladaha qaarkood, inuu ka kooban yahay warmo ama dhibco (tusaale ahaan, xarafka ene).
Jumladaha qarniyadii dhexe: Angel Wish
Tani waa mid ka mid ah - waraaqaha qarniyadii dhexe qaab shaqsiyeed kaliya, taas oo macnaheedu yahay inaadan u adeegsan karin ganacsi ahaan, laakiin ma dhaawaceyso inaad ogaato. Way ka dhumuc yartahay midka aan kugula talinay Olde English, laakiin waxay raacdaa qaab aad ugu eg tan.
Naqshadeedu waxay dooneysaa inay dheereyso xarfaha si loo gaaro saameyn isdhaafsi ah oo udhaxeysa ereyada.
Xaaladdan oo kale, waxaad leedahay nooc qormadow ah oo dhexdhexaad ah xuruufta waaweyn iyo kuwa yaryar labadaba waxay la yimaadaan barwaaqo badan. Taasi waxay adkeyneysaa akhrinta xaalado badan, gaar ahaan waxay kuxirantahay ereyga aad dhigatay. Waxaan kugula talineynaa inaadan ku isticmaalin qoraalka badan.
Inta kale, shaki kuma jiro inay aad u qurux badan tahay.
Mid kale oo ka mid ah noocyada qarniyadii dhexe ee qaab aad u qurux badan, nidaamsan oo, ugu fiican oo dhan, la akhrin karo, waa Cardinal. Waxaa lagu gartaa xariiq inta badan fiican, iyo faahfaahin yar (inta badan dheereynta qaybo ka mid ah xarfaha qaarkood (far waaweyn iyo qaar xarfo yaryar ah).
Jumladaha qarniyadii dhexe: Qoraalka Medici
Haddii aad raadineyso warqad qurxinteedu ku taal qeybta hoose ee warqadda, fontani waxay noqon kartaa mid qumman. Hadaad fiiro gaar ah xarfaha waaweyn waxay leeyihiin barwaaqo badan laakiin dhammaantood waxay ku yaalliin salka warqadda, In kasta oo xuruufta hoose ay xoogaa cad yihiin, haddana waxay ka dhigayaan akhriska xoogaa dhib badan.
Zenda waa a - nooca loo yaqaan 'clarita medieval typeface', labada weeyn iyo mid yar. In kastoo, ay leedahay hal sifo oo ah in dhammaan xarfaha yaryar u muuqdaan inay leeyihiin xariiqyo jaantus ah oo ka soo baxa xagga sare iyo hoose. Xuruufta waaweyn, waxay leedahay naqshad udhaxeysa khadadka khafiifka ah iyo kuwa qaro weyn oo aad u qurux badan. Isku day inaad ka faa'iideysato ereyga oo dhan si aad u aragto saameynta.
Waxaan dhihi karnaa qaabka noocaan ah waa qoraal maxaa yeelay naqshadiisu aad ayey ubax badan tahay, maahan ubaxyo, laakiin faahfaahinta darteed. Taasi waxay ka dhigeysaa aqriskiisa mid dhib badan, waxaana kugula talineynaa xarfaha kaliya, laga yaabee inaad rabto inaad iftiimiso qeyb, maxaa yeelay hadaad dhigto, waxaa jiri doona ereyo aan waxba fahmayn maxaa yeelay khadadka ayaa iskaga khaldama
Jaangooyooyinka Qarniyadii dhexe: Frax Oo Lagu Qoray
Ma waxaad raadineysaa nooc qadiimiga ah oo u muuqda sida gacanta lagu qoray? Hagaag waxaad haysataa tan, Frax Gacmeed, laga bilaabo khad aad u fudud oo aad moodo inuu runtii gacanta lagu sameeyey. Dabcan, xarfaha waaweyn iyo kuwa yaryar waa kuwo aad ufudud, taas oo ka dhigaysa inay si waadix ah wax u akhriyaan (qaarkoodna waxaa laga yaabaa inaad xoogaa dhibaato ah, gaar ahaan tan, ele ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Fuentes » Moodo-qorista qarniyadii dhexe